ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာလဲ (လအလိုက်) - Real Gaming Myanmar
ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာလဲ (လအလိုက်)
ဖူးစာဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဘယ်လောက်ရှာရှာ မတွေ့တတ်သလို၊ တစ်ခါတလေ မရှာပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်က ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုသိချင်နေတဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် လအလိုက် ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံတတ်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။
သင်ဟာ စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးသူပီပီ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာလည်း သင့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပြီး သင့်ကိုအမြဲတမ်း အားပေးကူညီတတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အနားမှာရှိနေပြီး သင့်ဖက်ကနေရပ်တည်ပေးတဲ့သူပါပဲ …. ။
သင်ဟာ အရမ်းပေါက်ကွဲလွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိစ္စတိုင်းကို လိုက်ပြီးခံစားတတ်တဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ရဲ့ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့စရိုက်ကို နားလည်သည်းခံပေးပြီး စိတ်ရှည်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ် …. ။
သင်ဟာ အရမ်းကြင်နာသနားတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ ဝန်လေးတတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ သင့်ဖူးစာရှင်ဟာလည်း သင့်လိုပဲ အရမ်းချစ်တတ်ပြီး သင့်ကို ဂရုစိုက်ကြင်နာမယ့်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …. ။
သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင် အထင်ကြီးပြီး ဘဝင်မြင့်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာ သင်မလုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ မဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို ဇွတ်အတင်းဖိအားပေးမယ့်သူ မဟုတ်သလို၊ သင့်ကို လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးမယ့်သူမျိုးပါ …. ။
သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး အောင်မြင်ချင်စိတ်ပြင်းထန်သူပါ။ သင့်ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ အများကြီးရှိသလို၊ သင့်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူမျိုးကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အကူအညီပေးပြီး ဘယ်တော့မှ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတားအဆီးမပေးမယ့် သူမျိုးဖြစ်ပါတယ် …. ။
သင့်အတွက် စကားပြောဖော်ကောင်းတစ်ယောက်က အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်စိတ်ထဲရှိသမျှကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမဆို သင်နဲ့ ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …. ။
သင့်ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ကိုချစ်ပြီးရင် ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်တော့မယ့် သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် သင့်ကိုချစ်တဲ့သူမရှားပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ပဲ သင်ဟာမြာပွေတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ် ဒါပေမယ့် သင့်ဖူးစာရှင်က သင့်ကိုခွင့်လွှတ်မယ့်သူမျိုးပါ …. ။
သင်ဟာ မွေးရာပါခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းရှိသူပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီး လူအများကို သင့်ဖက်ပါအောင် အချိန်တိုအတွင်း လုပ်နိုင်တဲ့သူပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဟာလုပ်ရဲရင် ခံရဲတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ကို အစစအရာရာ လိုက်လျောပေမယ့် မကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ပေးနိုင်တဲ့ သူမျိုးပါ …. ။
သင်ဟာ အာဏာရပြီးခြယ်လှယ်ချင်တဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ရှိသူတစ်ဦးပါ။ သင်ဟာ အရမ်းကို အဆင့်အတန်းမြင့်ချင်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ အရမ်းများတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ကတော့ သင်မျှော်လင့်ထားတာထက် သာလွန်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် …. ။
သင်ဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ဖို့နဲ့ လူတွေကို သိပ်အာရုံမစိုက်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ သူကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့အမြင်၊ ဝေဖန်မှုတွေကို အရမ်းအာရုံစိုက်တတ်သူပီပီ အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ်၊ ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ သင့်ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ကိုသင်ယုံကြည်မှုရှိစေပြီး သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်တတ်ဖို့ ကူညီပေးမယ့် သူမျိုးဖြစ်ပါတယ် …. ။
သင်ဟာ အရမ်းကိုရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာဘယ်တော့မှ အလုပ်နဲ့လက်မပြတ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်သူပါ။ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ကို စိတ်ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းစေမယ့်၊ အမောပြေစေမယ့် သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ကို မွန်းကျပ်စရာတွေ၊ များပြားလွန်းတဲ့ အလုပ်တွေဆီကနေ ခေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပါ …. ။
သင်ဟာ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်လို့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာလည်း သင့်ရဲ့အကျင့်နဲ့ထပ်တူ ရောင်ပြန်ဟပ်စေမယ့်သူပါ။ သူနဲ့အတူရှိနေရရင် သင်ဟာ အရမ်းသက်တောင့်သက်သာဖြစ်သလို ခံစားရပြီး သင့်အပေါ်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကို ခံစားစေမယ့်သူမျိုးပါ။ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာ ယုံကြည်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သင့်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးပြီး သင့်အနားမှာအမြဲရှိနေမယ့် သူမျိုးပါ …. ။
ဖူးစာဆိုတာ ဆနျးကွယျပါတယျ။ တဈခါတလေ ဘယျလောကျရှာရှာ မတှတေ့တျသလို၊ တဈခါတလေ မရှာပမေယျ့လညျး ကိုယျ့ဆီကို ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျ ရောကျလာတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျက ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈမလဲဆိုတာ ကွိုသိခငျြနတေဲ့ ပြိုမလေေးတှအေတှကျ လအလိုကျ ဘယျလိုလူမြိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံတတျလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော …. ။
သငျဟာ စိတျခံစားခကျြပွငျးထနျပွီး ရညျမှနျးခကျြကွီးသူပီပီ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာလညျး သငျ့ရဲ့ဦးဆောငျမှုနောကျကို လိုကျပွီး သငျ့ကိုအမွဲတမျး အားပေးကူညီတတျတဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘယျလိုအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ သငျ့အနားမှာရှိနပွေီး သငျ့ဖကျကနရေပျတညျပေးတဲ့သူပါပဲ …. ။
သငျဟာ အရမျးပေါကျကှဲလှယျသူတဈယောကျဖွဈပွီး ကိစ်စတိုငျးကို လိုကျပွီးခံစားတတျတဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ရဲ့ပေါကျကှဲလှယျတဲ့စရိုကျကို နားလညျသညျးခံပေးပွီး စိတျရှညျတဲ့သူမြိုးဖွဈပါတယျ …. ။
သငျဟာ အရမျးကွငျနာသနားတတျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျခဈြတဲ့သူတှအေတှကျဆိုရငျ ဘာမဆို ပေးဆပျဖို့ ဝနျလေးတတျသူ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ သငျ့ဖူးစာရှငျဟာလညျး သငျ့လိုပဲ အရမျးခဈြတတျပွီး သငျ့ကို ဂရုစိုကျကွငျနာမယျ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါလိမျ့မယျ …. ။
သငျဟာ သငျ့ကိုယျသငျ အထငျကွီးပွီး ဘဝငျမွငျ့တတျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျမလုပျခငျြတဲ့အရာ၊ မဖွဈခငျြတဲ့အရာကို ဇှတျအတငျးဖိအားပေးမယျ့သူ မဟုတျသလို၊ သငျ့ကို လှတျလပျခှငျ့အပွညျ့ပေးမယျ့သူမြိုးပါ …. ။
သငျဟာ ရညျမှနျးခကျြကွီးပွီး အောငျမွငျခငျြစိတျပွငျးထနျသူပါ။ သငျ့ဘဝမှာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ အမြားကွီးရှိသလို၊ သငျ့ကိုထိနျးခြုပျတဲ့သူမြိုးကိုလညျး မကွိုကျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ရညျမှနျးခကျြကို အကောငျအထညျဖျောရာမှာ အကူအညီပေးပွီး ဘယျတော့မှ သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အတားအဆီးမပေးမယျ့ သူမြိုးဖွဈပါတယျ …. ။
သငျ့အတှကျ စကားပွောဖျောကောငျးတဈယောကျက အလိုအပျဆုံးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့စိတျထဲရှိသမြှကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တိုငျပငျဆှေးနှေးလို့ရတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး ဘယျအကွောငျးအရာကိုမဆို သငျနဲ့ ကောငျးမှနျစှာပွောဆိုဆှေးနှေးပေးနိုငျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါလိမျ့မယျ …. ။
သငျ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ကိုခဈြပွီးရငျ ဘယျတော့မှ နောကျဆုတျတော့မယျ့ သူမြိုးမဟုတျပါဘူး။ သငျဟာ လူမှုဆကျဆံရေး ပွပွေဈကောငျးမှနျတဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ကိုခဈြတဲ့သူမရှားပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ပဲ သငျဟာမွာပှတေတျသူတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ကောငျးဖွဈခဲ့မယျ ဒါပမေယျ့ သငျ့ဖူးစာရှငျက သငျ့ကိုခှငျ့လှတျမယျ့သူမြိုးပါ …. ။
သငျဟာ မှေးရာပါခေါငျးဆောငျအရညျအခငျြးရှိသူပါ။ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြရှိပွီး လူအမြားကို သငျ့ဖကျပါအောငျ အခြိနျတိုအတှငျး လုပျနိုငျတဲ့သူပါ။ ဘယျလိုအခွအေနပေဲဖွဈဖွဈ သငျဟာလုပျရဲရငျ ခံရဲတဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ကို အစစအရာရာ လိုကျလြောပမေယျ့ မကောငျးတဲ့အရာတှဆေိုရငျ တားမွဈပိတျပငျပေးနိုငျတဲ့ သူမြိုးပါ …. ။
သငျဟာ အာဏာရပွီးခွယျလှယျခငျြတဲ့ ပငျကိုယျစိတျရှိသူတဈဦးပါ။ သငျဟာ အရမျးကို အဆငျ့အတနျးမွငျ့ခငျြပွီး မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အရမျးမြားတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ဒါပမေယျ့သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျကတော့ သငျမြှျောလငျ့ထားတာထကျ သာလှနျတဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ …. ။
သငျဟာ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကို ကနြေပျဖို့နဲ့ လူတှကေို သိပျအာရုံမစိုကျဖို့ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ သူကို လိုအပျပါတယျ။ သငျဟာ သူတဈပါးရဲ့အမွငျ၊ ဝဖေနျမှုတှကေို အရမျးအာရုံစိုကျတတျသူပီပီ အမွဲတမျးကိုယျ့ကိုယျကို မကမြေနပျ၊ ယုံကွညျမှုတှေ ပြောကျဆုံးနတေတျပါတယျ။ သငျ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ကိုသငျယုံကွညျမှုရှိစပွေီး သငျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုကို ခဈြတတျဖို့ ကူညီပေးမယျ့ သူမြိုးဖွဈပါတယျ …. ။
သငျဟာ အရမျးကိုရညျမှနျးခကျြကွီးပွီး စိတျအားထကျသနျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျဟာဘယျတော့မှ အလုပျနဲ့လကျမပွတျအောငျ လုပျတတျတဲ့သူဖွဈပွီး သငျ့ရဲ့အစှမျးအစတှကေို အကြိုးရှိရှိအသုံးခတြတျသူပါ။ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာ သငျ့ကို စိတျပြျောရှငျလနျးဆနျးစမေယျ့၊ အမောပွစေမေယျ့ သူတဈယောကျပါ။ သငျ့ကို မှနျးကပျြစရာတှေ၊ မြားပွားလှနျးတဲ့ အလုပျတှဆေီကနေ ချေါထုတျပေးနိုငျတဲ့သူမြိုးပါ …. ။
သငျဟာ ရိုးသားပွီး ယုံကွညျလို့ရတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာလညျး သငျ့ရဲ့အကငျြ့နဲ့ထပျတူ ရောငျပွနျဟပျစမေယျ့သူပါ။ သူနဲ့အတူရှိနရေရငျ သငျဟာ အရမျးသကျတောငျ့သကျသာဖွဈသလို ခံစားရပွီး သငျ့အပျေါကို အခဈြစဈနဲ့ခဈြတယျဆိုတာကို ခံစားစမေယျ့သူမြိုးပါ။ သငျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျဟာ ယုံကွညျရတဲ့သူတဈယောကျဖွဈသလို သငျ့ကိုအမွဲတမျးအားပေးပွီး သငျ့အနားမှာအမွဲရှိနမေယျ့ သူမြိုးပါ …. ။
Previous: အိမ်မြှောင်အသားစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀) မျိုး
Next: တစ်ပတ်အတွင်း ဆံပင်အရှည် မြန်စေမယ့်နည်း